Imaamka Beesha Mudullood oo Goor dhow lagu rasaaseyay Magaalada Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Imaamka Beesha Mudullood oo Goor dhow lagu rasaaseyay Magaalada Muqdisho
Ardaan Yare 13 February 2021
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa Ciidamo ka tirsan kuwa Asluubta dowladda Federaalka ayaa dhowr daqiiqado kahor qeyb kamid ah degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banaadir ku rasaaseeyay gaari uu la socday Imaamka Beesha Mudullood.
Goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in gaariga uu saarnaa Imaam Maxamed Yuusuf iyo xubno kale oo la socday lagu rasaaseeyay, xili uu marayay agagaarka Xarunta Maxkamadda Gobolka Banaadir.
Gaariga Imaanka ayaa marka hore kasoo gudbay Koontaroolka koowaad ee wadada hormarta xabsiga Dhexe, hayeeshee mar uu marayay Koontaroolka labaad ayaa rasaas xoogan ay ku fureen Ciidamo ka tiran kuwa Asluubta dowladda.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan in Ciidanka Ilaalada Asluubta ee joogay Koontaroolka koowaad lagu wargeliyay inuu wadada marayo gaari ay la socdaan xubno ka tirsan Duubabka Dhaqanka, isla markaana lasii daayo.
Khasaaro dhaawacyo ayaa soo gaaray qaar kamid aj Ciidanka Ilaalada ee la socday Imaamka Beesha Mudullood ee Maxamed Yuusuf, kuwaasi oo la qaaday Xarun caafimaad oo ku taalla Magaalada Muqdisho.
Gaariga Imaamka la socday ayaa waxaa wehliyay xubno ka tirsan Dhaqanka Mudullood oo ka yimid gogosha Tacsida Gen. Maxamed Nuurl Galaal, waxaana la tilmaamay in labada kamid ah xubnaha la socday oo gaariga saarnaa uu dhaawac soo gaaray.
Maxkamadda ICJ oo diiday Codsigii Kenya ee dib u dhigista Dacwada Badda
Dowladda oo bilaabeysa qorshe looga hortegayo laba kacleynta COVID-19